China Agricultural Umanyolo Spreader ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Isisabalalisi sikamanyolo esingenamandla iyithuluzi lokusabalalisa umanyolo eliqhutshwa phansi, elingadonswa ngogandaganda wasengadini onamandla angaphezu kwe-15 amahhashi noma ngogandaganda we-18 + HP. Ikakhulu ukufafaza umanyolo endaweni encane. Isisabalalisi esincane somquba singasabalalisa umanyolo wamakhemikhali, usawoti, amatshe amancane, ukuvuka, ukhula, nomquba ophilayo, njalonjalo.
Ikhono lokushaya 16in³ / 0.453m³
Amandla 28in³ / 0.793m³
Ubukhulu sekukonke 114 * 46.5 * 30.5in / 2895 * 1181 * 775mm
Ubukhulu bomzimba 72 * 28 * 18in / 1829 * 711 * 457mm
Ububanzi bokuvula 36in / 914mm
Ilayisha ukuphakama 30.5in / 775mm
Usayizi (L * W * H) 1230 * 456 * 789 cm
Isisindo 1.2 T
Okufakiwe Yekuchumana 1. Iphakheji ngebhokisi lesikrini lensimbi;
Iphakethe 2.special futhi logo kungenziwa egcizelele.
Yamukela insimbi engagqwali engu-304 eyenza umzimba oqinile futhi ulwe nokugqwala kakhulu.
Yamukela ibhokisi le-12GA lensimbi eliphelele, i-A-frame hook design, ifreyimu yensimbi esindayo, uhlobo lokudonsa emuva, idrayivu yomhlabathi.
1. Kushayelwa amasondo amabili
2. 304 Insimbi engagqwali, iyasuswa
3. Isondo lokudonsa elingu-28psi * 6.00-12, ububanzi besondo 6ft, rim 12ft
4. Ukuthwala ibhola okuvalisiwe
5. Ishayelwa phansi, isondo le-ratchet
6. Ukuvikeleka kwesihlabathi sohlangothi ukuvikelwa
Izinto Ezidinga Ukunakwa
1. Lapho umshini usebenza, akuvunyelwe neze ukusondela emishini nasemathulini, futhi akuvunyelwe nakancane ukuthi umzimba womuntu uthinte izingxenye ezihambayo.
2. Ngesikhathi sesondlo, amandla kagandaganda azonqunywa ukuqinisekisa ukuphepha.
3. Umshini kufanele umiswe uma kunenkinga.
Sicela wazi ukuthi!
1. Faka uwoyela othambisa ngokwanele ngaphambi kokuwusebenzisa!
2. Hlola ukuthi izingxenye zisesimweni esihle yini nokuthi iziqobosho zikhululekile yini!
3. Faka umanyolo kufanele ungabi nezitini, amatshe, izinsimbi, ukuze ungalimazi ipuleti likamanyolo!
4. Sicela ugcwalise izingxenye zokuthambisa ngamafutha okugcoba ngesikhathi sokusebenzisa!
(1) Uma ingasetshenziswa isikhathi eside, kufanele ibekwe endaweni eyomile ukugwema izingxenye zokugqwala.
(2) Ngemuva kokusetshenziswa ngakunye, umshini kufanele uhlanzwe, futhi ama-sundries ahlanganiswe ezingxenyeni kufanele ahlanzwe ukugwema ukugqwala. Uma ingahlanzwa, akukuhle ukusetshenziswa okulandelayo.
(3) Hlohla njalo uwoyela omncane ezingxenyeni ezijikelezayo ukuqinisekisa ukuthambisa.
Langaphambilini Amatebhe Umanyolo Truck